COP26: पर्यटन उद्योग खतरनाक जलवायु परिवर्तनको समाधानको हिस्सा बन्न चाहन्छ
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » स्थिरता समाचार » COP26: पर्यटन उद्योग खतरनाक जलवायु परिवर्तनको समाधानको हिस्सा बन्न चाहन्छ
अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • सरकारी समाचार • जमैका ताजा समाचार • केन्या ब्रेकिंग न्यूज • समाचार • मान्छे • साउदी अरब ब्रेकिंग न्यूज • स्थिरता समाचार • अहिले प्रचलनमा • यूके ब्रेकिंग न्यूज
नोभेम्बर 3, 2021
जलवायु परिवर्तनको समाधानको रूपमा पर्यटनमा प्यानल छलफल
जलवायु परिवर्तनमा विजेताहरूको टोली आज गठन भयो: साउदी अरेबिया, केन्या, जमैका सेनामा सामेल हुनुहोस् र COP26, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा अरूलाई आमन्त्रित गर्नुहोस्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको २६ औं सम्मेलनमा आज पर्यटन एजेन्डामा थियो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) मा ग्लासगो, बेलायत
Traveling from the World Travel Market London to Glasgow to participate in COP26 were the Hon. Minister of Tourism for Jamaica, Edmund Bartlett, the Hon Secretary of Tourism for Kenya Najib Balala, and His Excellency, the Minister of Tourism for Saudi Arabia Ahmed Aqeel AlKhateeb
साउदी मन्त्रीले आफ्नो टिप्पणीमा जलवायु परिवर्तनमा सेनामा सामेल हुन पर्यटनको टोन सेट गरे।
केन्या, जमैका र साउदी अरबका यी तीन पर्यटन नेताहरूले आज ग्लासगोमा COP26 मा विश्वव्यापी यात्रा र पर्यटन संसारको लागि टोन सेट गरे।
पर्यटनलाई समाधानको भाग बनाउन सेनामा सामेल हुने छलफल मेक्सिकोका पूर्व राष्ट्रपति फेलिपे काल्डेरोनद्वारा संचालित थियो।
प्यानलमा रोजियर भ्यान डेन बर्ग, विश्वव्यापी निर्देशक, विश्व संसाधन संस्थान; रोज Mwebara, निर्देशक र जलवायु प्रविधि केन्द्र र नेटवर्क प्रमुख, UNEP; भर्जिनिया मेसिना, SVP एड्भोकेसी, विश्व यात्रा र पर्यटन परिषद (WTTC); जेरेमी ओपेनहेम, संस्थापक र वरिष्ठ साझेदार, प्रणालीगत, निकोलस स्वेनिंगेन, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शनका लागि प्रबन्धक, UNFCCC
HE अहमद अकील अलखतीब आफ्नो टिप्पणीमा भने:
आदरणीय अतिथिहरु, महिलाहरु, र सज्जनहरु।
सस्टेनेबल टुरिज्म ग्लोबल सेन्टरलाई सहयोग गर्न आज हामीसँग सामेल हुनुभएकोमा धन्यवाद।
जलवायु परिवर्तन मानवताको सामना गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो, त्यसैले हामी यहाँ ग्लासगोमा छौं।
यात्रा र पर्यटनका लागि दुई वर्ष कठिनाइ पछि, यात्रा फिर्ता आउँदैछ।
र यो जताततै पर्यटन व्यवसायहरूको लागि राम्रो समाचार हो, हामीले भविष्यको वृद्धि हाम्रो ग्रहसँग सन्तुलनमा छ भनेर सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
नेचर द्वारा 2018 मा प्रकाशित अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि पर्यटनले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको 8% योगदान गर्दछ।
IPCC को 2021 रिपोर्ट एकदम स्पष्ट छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न हामी सबैले तत्काल र बलियो कदम चाल्नुपर्छ।
त्यसोभए, के गर्न सकिन्छ?
पेरिस सम्झौताले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासको आवश्यकतासँग सन्तुलनमा रहेको जलवायु परिवर्तनको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
विश्व अर्थतन्त्रको लागि पर्यटन निस्सन्देह एक महत्वपूर्ण उद्योग हो।
330 मिलियन भन्दा बढी मानिसहरू आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि यसमा निर्भर छन्।
पूर्व-महामारी, ग्रहमा कहीं पनि सिर्जना गरिएको हरेक चार नयाँ रोजगारी मध्ये एक पर्यटन मा थियो।
पर्यटन उद्योग, यो भनाइ बिना नै जान्छ, खतरनाक जलवायु परिवर्तनको समाधानको एक हिस्सा बन्न चाहन्छ।
तर, अहिले सम्म, समाधानको हिस्सा हुनु भनेको भन्दा धेरै सजिलो भएको छ।
त्यो किनभने पर्यटन उद्योग गहिरो खण्डित, जटिल र विविध छ।
यसले अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा कटौती गर्दछ।
40 मिलियन भन्दा बढी पर्यटन व्यवसायहरू - वा सम्पूर्ण उद्योगको 80 प्रतिशत - साना वा मध्यम आकारका छन्।
तिनीहरू ट्राभल एजेन्टहरू, रेस्टुरेन्टहरू, वा साना होटलहरू हुन्।
तिनीहरूसँग समर्पित स्थिरता विभागहरूको लक्जरी छैन
वा सम्बन्धित अनुसन्धान र विकासको लागि बजेट।
धेरै कम तिनीहरूसँग उच्च भुक्तान गरिएको व्यवस्थापन सल्लाहकारहरूको टोलीहरूमा पहुँच छ जसले तिनीहरूलाई आफ्नो तल्लो रेखा कायम राख्दै कार्बन फुटप्रिन्ट काट्न सक्ने तरिकाहरूमा सल्लाह दिन सक्छ।
फलस्वरूप, आजसम्म, उद्योगले - राम्रो नियतका बाबजुद पनि - जलवायु परिवर्तनको चुनौती समाधान गर्न मद्दत गर्न पूर्ण भूमिका खेल्न सकेको छैन।
अब, अन्तमा, त्यो परिवर्तन हुन सक्छ।
साउदी अरेबियाका क्राउन प्रिन्स, HRH मोहम्मद बिन सलमानले दिगो पर्यटन ग्लोबल सेन्टरको राज्य भित्र निर्माणको घोषणा गरेका छन्।
केन्द्रले बहु-देशीय, बहु-हितधारक गठबन्धनलाई एकसाथ ल्याउनेछ।
यसले दिगोपनलाई सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रो सामूहिक दृष्टिकोणलाई रूपान्तरण गर्नको लागि यस क्षेत्रलाई उत्कृष्ट-इन-वर्ग मार्गदर्शन र विशेषज्ञता प्रदान गर्नेछ।
STGC रोमाञ्चक छ किनभने यसले पर्यटन क्षेत्र, सरकारहरू, शिक्षाविद्हरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका मानिसहरूलाई भेट्ने ठाउँको रूपमा काम गर्नेछ।
एउटा केन्द्र जहाँ हामी स्थिरतामा उत्कृष्ट दिमागहरूबाट सिक्न र नेट-शून्य भविष्यमा हाम्रो सामूहिक संक्रमणलाई गति दिन सम्बन्धित ज्ञान र उत्तम अभ्यासहरू साझा गर्न सक्षम हुनेछौं।
र त्यसो गरेर प्रकृतिको रक्षा गर्नुहोस् र समुदायहरूलाई समर्थन गर्नुहोस्।
आलोचनात्मक रूपमा, यसले हामीलाई यी परिवर्तनहरू गर्न सक्षम बनाउँदछ जबकि एकै समयमा रोजगारहरू प्रदान गर्दछ र नवाचारलाई उत्तेजित गरेर र ज्ञान, उपकरणहरू, र वित्तिय संयन्त्रहरू प्रदान गरेर विकासको ड्राइभिङ गर्दछ।
म यस सम्मानित प्यानलसँग केन्द्रसँग छलफल गर्न तत्पर छु, कसरी STGC ले पर्यटन उद्योगलाई शुद्ध-शून्य उत्सर्जनमा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ, र प्रकृति र समुदायहरूलाई समर्थन गर्न कार्यहरू चलाउन मद्दत गर्दछ।